တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ မြင့်မားသောအဆင့် ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းကို ရုရှားနိုင်ငံက ကျေနပ်အားရကြောင်း သမ္မတပူတင် ပြောကြား - Xinhua News Agency
မော်စကို ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်က တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးများ၏ မကြုံစဘူး မြင့်မားသော အဆင့်တစ်ခုအတွက် ကျေနပ်အားရမှုရှိကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။“ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာမှာ ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဖက်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို ကျွန်တော်တို့က အစဉ်အမြဲလေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လေးစားသလိုပဲ သူတို့က တူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည် ပြုမူတဲ့အပေါ် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ် ။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ တူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို အမြဲပြုမူပါတယ်” ဟု “Russia Calling” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖိုရမ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ရုရှားသမ္မတပူတင်က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတပူတင်က စီးပွားရေးအရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ယင်းမှာ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ရာ ဟန့်တားထိန်းချုပ်မှုမလုပ်သင့်ကြောင်း ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအား ကန့်သတ်မှုများ နှင့် ပိတ်ဆို့မှုများသည် “ ကြောင်းကျိုးမှန်ကန်မှုမရှိ” ကြောင်း နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ရှုပ်ထွေစေကြောင်း ပူတင်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စစ်အင်အားအလားအလာနှင့်ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအပေါ် ပူတင်က တရုတ်နိုင်ငံသည် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန် အခွင့်အရေးရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကို ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရုရှားနိုင်ငံက မရှုမြင်ကြောင်း ၊ တရုတ်-ရုရှား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုအတွက် အဓိကအရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်နေကြသူများဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေး အဆင့်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဒီထက်ပိုလို့ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖြစ်နိုင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ရော ၊ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတစ်ခုကို ဦးတည်ရင်း ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်” ဟု ပူတင်က ဆိုသည်။(Xinhua)
MOSCOW, Nov. 30 (Xinhua) — Russia enjoys an unprecedentedly high level of interstate relations with China, Russian President Vladimir Putin said Tuesday.
“At the same time, we always respect the interests of our partners in the international arena and appreciate it when they treat us the same way. China treats us the same way,” the president said at the “Russia Calling” investment forum.
Turning to China’s development, Putin said that the country is growing economically, and this isanatural process that shouldn’t be contained.
Putin added that restrictions and sanctions against China in this context are “unjustified” and contradict the norms of international law.
Asked about China’s military potential, Putin said that China has the right to defend itself.
“We are satisfied with the level of our relations, we think that they can be even deeper, more meaningful and lead toapositive effect, both for the people of China and for the people of Russia,” Putin said. ■